शब्दकोश: अस्ताएको छैन है उदयपुर !
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, November 13, 2008
उजेली November 15, 2008
यति राम्रा राम्रा कुरा भएको उदयपुर कसरी अस्ताउन सक्छ ?? नेपालका सबै अत्याधुनिक सुविधा चाँडै नै पुगेर नयाँ युगको उदय हुन्छ होला शायद अब उदयपुरमा ।
Basanta Gautam November 15, 2008
साह्रै सकारात्मक र आशालाग्दो कुरा गर्नुभयो धाईबाजी! हाम्रो देशमा अस्ताएकोमात्रै समाचार बन्ने चलन छ। उदाइरहेकोलाई देख्दैनन् सबैले।
तर यात्रा अझै लामै बाँकी छ, उदयपुरले अझ धेरै उदाउनु छ। उदयपुरजस्ता धेरै 'पुर' हरु राजधानीजत्तिकै नउदाईकन यो लोकतन्त्र वा संघियता जे भनेपनि, आएको मान्न सकिने छैन।
तस्वीरहरुका लागि धन्यबाद। नेपालका हरेक तस्बीरले भावुक बनाउँछ, गर्व जन्माउँछ म भित्र।
उदयपुर उदाईरहोस् सधैं अझ माथि-माथिको उचाइमा, यहि शुभकामना!
दीपक जडित November 16, 2008
तपाईंहरुले आफ्नै जमघटमा भन्नुभएको हुँदा 'अस्तपुर' भनिनुमाथी टिप्पणी गर्नुपर्ला झैं लाग्दै लागेन बरु वास्तवमा माया भनेकै त्यही हो - गाउँको माया , समाजको माया , देशको माया , माटोको माया जस्तो लाग्यो ता कि सगरमाथा कसरी अझै अग्लो पार्न सकिन्छ भन्ने सोचको खोज ।
तस्विरमा गाउँ , गाउँमा असौज कार्तिकको समय , त्यही समयमा लगभग तयार भएको बाली , करेसामा फलेको अंबा , आँगनमा बनस्पती पुतली र जैबिक फूलले त्यसको रस चुसिरहेको , हाटबजार , मेलापात सबै समेटेर हाम्रो अगाडी पस्किनुहुँदा सम्झनामा ओझेल पर्दै गएका गाउँघरका धेरै पाटोहरु एक्कैचोटी उपस्थित भए । मलाई अरुले हेर्ने बुझ्ने तरिका अलग्गै होला त्यो अर्कै कुरा हो तर मैले भने तपाईंमाथी गर्व गरें । सलाम तपाईंको माटो प्रतिको त्यो मायालाई ।
Dilip Acharya November 16, 2008
अस्ताएको छैन, हुन्न र पक्कै पनि अस्ताउँदैन !!